लाइसेन्सविहीन क्यासिनो प्रहरी कै सेटिङमा चल्दै ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
लाइसेन्सविहीन क्यासिनो प्रहरी कै सेटिङमा चल्दै ?
प्रकाशित मिति २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १६:०० लेखक नेपाली जनता
भैरहवा । भैरहवामा सञ्चालनमा रहेको हयाप्पी आवर, गेम्बिङ क्लव मिनी क्यासिनोले गैरकानूनीरुपमा दुईवटा शाखा सञ्चालन गरेको छ ।
ह्याप्पी आवरले प्रहरीसंगको सेटिङमा अवैधानिक तवरले मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दा समेत सरकारी निकायले कुनै कार्वाही गर्न सकेको छैन । प्रहरी प्रशासन समेत मौन देखिन्छ ।
यहाँका होटल लाकौल र नान्स होटलमा ह्याप्पी आवर क्यासिनोका दुईवटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । जुन ५० मिटरको फरकमा रहेका छन् ।
विक्रम सम्बत २०६८ सालमा भैरहवामा होटल नान्समा सञ्चालन गर्न अनुमति ल्याएको यो मिनी क्यासिनोमा सञ्चालकहरुको आपसी विवादले गर्दा होटल लाकौलमा सरेको थियो ।
लाकौलमा क्यासिनो सरेपछि पुन त्यसैको नाममा होटल नान्समा पनि विगत १५ महिनादेखि ह्याप्पी आवरको नाममा अर्को मिनी क्यासिनो अबैधरुपमा सञ्चालन भैरहेको छ ।
सरकारी नियम अनुसार एउटा क्यासिनोले एक ठाउँमा एक वटा गरि नेपालभर ४ वटा मिनी क्यासिनोको शाखा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान रहेपनि ह्याप्पी आवरले ५ वटा शाखा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसको नेपालगञ्जमा होटल स्नेहा, काँकडभित्ताको होटल ढाका, महेन्द्रनगरको होटल स्वीट ड्रीम, भैरहवाको होटल लाकौल र नान्समा गरेर ५ वटा शाखा संचालनमा रहेका छन् । जुन सरकारी नियम विपरीत रहेको बताइन्छ ।
एउटा शाखा क्यासिनो खोले बापत बार्षिक राज्यलाई ७५ लाख राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जुन भैरहवामा सञ्चालन रहेको होटल नान्सको मिनी क्यासिनाले प्रहरी सेटिङमा पैसा खर्च गरेपनि राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि रोयल्टी नबुझाएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सीमाक्षेत्रमा खोलिएका मिनी क्यासिनोहरुमा दैनिक १० देखि १५ लाख सम्मको कारोवार हुने गर्दछ तर यस्तो ठूलो कारोवार गर्ने क्यासिनोहरु अबैधरुपमा सञ्चालन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरु बताउछन् ।
ह्याप्पी आवर मिनी क्यासिनोका व्यवस्थापक झपेन्द्र दंगासेलाई बुझ्दा नेपालभर आफ्ना ४ वटा मिनी क्यासिनोका शाखाहरु सञ्चालनमा रहेको बताउदै भैरहवाको होटल नान्समा सञ्चालनमा रहेको मिनी क्यासिनो अवैध भएको जानकारी दिए ।
उनले नान्सको क्यासिनो सञ्चालकहरुसंग आफ्नो प्रा.लि.को कुनै पनि सम्बन्ध नरहेकाले यो कसरी सञ्चालनमा आएको हो राज्यसंग बुझ्न पर्ने बताए ।
होटल नान्सका सञ्चालक चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठलाई किन अबैध मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरेको भनेर सोध्दा उनले आफ्नो होटलमा सञ्चालन रहेको क्यासिनो सरकारी मापदण्ड र प्रकृयामा नरहेको स्वीकार्दै सरकारी निकायसंगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको बताए ।
संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय रुपन्देही प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र ढकालले एउटा लाईसेन्स देखाएर दुईवटा क्यासिनो सञ्चालन गर्नु गलत भएको बताउदै आपूm भर्खर आएकाले यसको विषयमा थप बुझेर कार्वाही अगाडि बढाउने बताए ।
रुपन्देहीका प्रमख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर रानाले आपूmलाई यस बिषयमा जानकारी आएको र अध्ययन गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिने जानकारी दिए ।
नेपाल सात वटा ठूला क्यासिनो र ३ वटा मिनी क्यासिनोहरु सञ्चालन रहेका छन् । ठूला क्यासिनोहरुले शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था नभए पनि मिनी क्यासिनोहरुले नेपाल भरी ४ वटा शाखा खोल्न पाउछन् ।
अब हरेक प्रदेशमा रंगशाला, २ अर्ब चार करोड बजेट छुट्याइयाे
काठमाडौं । सरकारले हरेक प्रदेशमा रंगशाला बनाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटमा हरेक प्रदेशमा ठूला…
४० करोडकाे प्रधानमन्त्री निवास !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वर्षभित्र नयाँ निवास बन्ने भएको छ। बालुवाटारको अहिलेको संरचना भत्काएर दुई भवन बनाउने सरकारी…
नागरिक उड्डयनमा अर्बौ घोटला, आङछिरिङको डिजाइनमा सचिव न्यौपाने हटाइए !
काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सार्वजनिक…
यस कारण भएन खानेपानी सचिवको सरुवा
काठमाडौं । खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको सचिवबाट हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल भएको छ ।खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र…
जव औषधि बोकेर महाबीरकाे ड्रोन उड्यो…
म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ नागीस्थित हिमाञ्चल विद्यालयको चौरबाट आइतबार उडेको ड्रोन पारिको राम्चे गाउँ पुग्यो । करिब डेढ किलोमिटर…
आउँदै १६ जलविद्युत् कम्पनीका साधारण सेयर
काठमाडौं । निकट भविष्यमा डेढ दर्जन जलविद्युत् कम्पनीका प्राथमिक सेयर९आईपीओ० बजारमा आउने भएको छ। ती कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिका…